Tongava mpisolovava mpiara-miasa amin'ny FIDULINK hamorona tamba-jotra ny orinasako
MITADIAVO FAMPISORIANA NY FIDULINK
MITADIAVO AZY DIA KOLONDRANA
Mpisolovava ve ianao? voamarina sa vao manomboka? Te hiditra amin'ny tamba-jotra iraisam-pirenena ve ianao hampitomboana ny mpanjifanao sy ny tamba-jotra? Midira amin'ny mpiara-miombon'antoka Mpisolovava dia mamorona toerana misy ny mpiara-miasa aminao ary mandray mivantana ny fangatahana FIDULINK.
Mandraisa anjara amin'ireo mpahay lalàna mpisolovava ao amin'ny vavahadin'i FIDULINK dia ny fahazoana fangatahana serivisy, torohevitra, iraka, solontena, fiarovana ... mivantana avy amin'ny sehatra FIDULINK.
Ho lasa mpiara-miasa ianao dia tsy manelingelina anao amin'ny fomba rehetra handraisanao ny fangatahana mivantana amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny alàlan'ny fampiharana finday izay ekenanao ny iraka na nolavinao.
Dia manjary mpisolovava FIDULINK dia mahazo fangatahana amin'ny kitapo vitsivitsy. Fisoratana anarana maimaim-poana mandritra ny minitra 5. Fiofanana momba ny sata mifehy ny FIDULINK , Serivisy, Fahaiza-manao amin'ny FIDULINK atolotra (ity dingana ity dia mitaky ny 45 minitra).
MAHAFINARITRA FIDULINK LAWYER?
Mpisolovava mahaleo tena na orinasam-pitsarana dia mila miditra ao amin'ny FIDU fotsiny ianaoLINK
Hanara-maso ny raharaham-barotra sy ny lahatahiry avy amin'ny habaka MY OFFICE , fitaovana tena ilaina hanatanterahana ny irakao amin'ny maha mpisolovava anao ary koa ny serivisy rehetra misy.
Ho tonga mpiara-miasa
Aoka ho mpisolovava iray FIDULINK manatevin-daharana vavahadin'ny serivisy ara-dalàna manerantany izy io. Miaraka amin'ny fisian'ny firenena maherin'ny 150 manerantany MY OFFICE dia manolotra anao fahafahana mandray ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.